प्रेम सम्बन्धका दुःख पनि कस्तो–कस्तो, विश्वास परीक्षण गर्न ३ महिना लगाए हथकडी – ramechhapkhabar.com
प्रेम सम्बन्धका दुःख पनि कस्तो–कस्तो, विश्वास परीक्षण गर्न ३ महिना लगाए हथकडी
हामीले लामो दूरीको प्रेम सम्बन्धको बारेमा धेरै सुनेका छौं। दूरी जति त्यतिनै माया बढ्छ भनेर अनगिन्ती साहित्य पनि कोरिएका छन्च र चलचित्र बनेका छन्। जे भएपनि ‘सम्बन्ध विश्वासमा अडिएको हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई सबै समयका मानिसहरुले स्वीकार गरेका छन्। प्रेम सम्बन्धमा रहेका मानिसहरुले आफ्नो माया चोखो रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न तवर र तरिका अपनाउँछन् पनि।
युक्रेनमा भने एलेक्जेन्डर र भिक्टोरिया नाम गरेका एक जोडीले आफ्नो माया चोखो रहेको पुष्टि गर्न र विश्वास परीक्षण गर्न तीन महिनासम्म हथकडी लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो समाचार यतिबेला विश्वभर भाइरल बनेको छ। यसै महिनाको १४ तारिख अर्थात् प्रेम दिवसको दिन देखि उनीहरुले हथकडी लगाउन थालेको ल्याड बाइबलले जनाएको छ।
उनीहरुले तीन महिनासम्म हथकडी लगाउने छन्। यस अवधिमा हथकडी लगाएका उनीहरु जता गए सँगै गएका छन्। सामाजिक संजालमा उनीहरुले आफ्नो बारेमा अपडेट दिइरहेका छन्। उनीहरु सँगै नुहाउँछन् भने उनीहरुले बाथरुम पनि एउटै प्रयोग गरेका छन्।
डाक्टरले भने पछी आखा चिम्लेर खो’लिदिए..
काठमाण्डौं:-डाक्टरले भने पछी आखा चिम्लेर खो’लिदिए.. अन्तिम सम्म यस्तो गरे हेर्नुहोस भिडियो ..भिडियो हेर्न यहाँ 👇👇तल क्लिक गर्नुहोस
काठमाण्डौंको बानेश्वरमा बस्ने उनी हाल नेपाल कमर्श क्याम्पसमा बीबीए अध्ययनरत रहिछन् । घर भने प्युठान रहेछ ।केही समयअघि बसाइ सरेर राप्ती गाउँपालिका अर्थात हाम्रै गाउँमा आएका रहेछन् उनका परिवार । हामी त अब छिमेकी भएछौ नी नाम के हो भनेर मैले सोधेँ ।
उनले मुस्कुराउदै जवाफ दिइन् ‘छिमेकीको नाम अब आफै पत्ता लगाउनुस् म त नभन्ने ।’ यतीभन्दा म केही समय बोल्नै सकिन चु’प लागेर बस्न बा’ध्य भए । मलाई अ’ल्लारे केटा भनेर नाम भनिनन् कि ? वा फेसबूकमा रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेर पो होकी ? नाम नभनेको, यति सोच्दै गर्दा उनले आफ्नो नाम सुनिता गाहा मगर (नाम परिर्वतन) भएको बताइन् ।
छिमेकीको नाता जो’डिसकेको हुँदा अब हामीलाई एकअर्काबीच गफगाफ गर्न कुनै अ’सहजता बाँकी थिएन । गफ यसरी जम्न थाल्यो कि समय बितेको पत्तै भएन क्षणभरमा बुटवल पुगेछौं । अक्सर यति चाँडो बुटवल पुगेकोजस्तो अनुभव यसअघि मलाई भएको थिएन ।